को हुन् ति ह्याण्डसम ? जसलाई संस्कारी नायिका भनेर चिनिएकी केकी अधिकारीले पत्याइन् र कस्दैछिन् लगनगाँठो ? – Annapurna Post News
April 20, 2022 sujaLeaveaComment on को हुन् ति ह्याण्डसम ? जसलाई संस्कारी नायिका भनेर चिनिएकी केकी अधिकारीले पत्याइन् र कस्दैछिन् लगनगाँठो ?
नायिका केकी अधिकारी विबाह बन्धनमा बाधिने भएकी छन् । बुझिए अनुसार उनी आज भोलि मै बिबाह बन्धनमा बाधिन लागेकी हुन् । केकी भन्दा उमेरले कान्छा उमेरका प्रेमी सँग बिबाह बन्धनमा बाधिन लागेको बताइएको छ । यद्यपी नाम भने नखुलेको बताइएको छ ।
यदि आजै विवाह हुन लागेको हो भने भोलि फोटो आइहाल्छ । त्यतिन्जेल प्रतीक्षा गर्नुस् भन्दै केकी टकटकिएको बताइएको छ । केकी निकट एक अभिनेत्रीले पनि केकी पहिल्यैदेखि आफ्नो विवाह गोप्य तरिकाले गर्ने चाहना व्यक्त गर्थिन् ।
भोलिपल्ट फोटो आएपछि थाहा भयो भने पनि चित्त नदुखाउनु भन्थिन् । यसो त केकीका समकालिन अभिनेत्रीहरु बिवाह बन्धनमा बाभिइसकेका छन् । केकी नेपाली सिने क्षेत्रमा संस्कारी नायिकको रुपमा परिचित छन् ।
यो पनि : पल शाह प्रकरणमा दुर्गेश थापाले भने, ‘मलाई केही थाहा छैन’ : अभिनेता पल शाहविरुद्ध कर णीको मुद्दामा नाबालिकाको बुवालेसमेत अदालतमा बयान फेरेका छन्।
मंगलबार जिल्ला अदालत तनहुँमा बकपत्र दिने क्रममा उनले छोरीको कुरालाई आधार मानेर जाहेरी दिएको बताएको जिल्ला अदालत तनहुँका मिनबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
‘जाहेरीवालाको बकपत्र होस्टाइल भयो। पहिला जाहेरीमा जे उल्लेख थियो, ठ्याक्कै विपरीत बयान दिनुभयो,’ श्रेष्तेदार कुँवरले भने ‘उहाँले जाहेरीमा गरेको हस्ताक्षर आफ्नै भएको स्वीकार गर्नुभएको छ।’मंगलबार उपस्थित नभएका सरकारी पक्षकाहरुलाई झिकाउन पेसी तोकिएको उनले बताए। उनकाअनुसार मंगलबार नै दुर्गेश थापाले पनि बकपत्र दिएका छन्। ‘दुर्गेशजीले सो क्रममा दुई जनाको बिषयमा मलाई थाहा छैन। मैले सुनेको मात्र हुँ भन्नुभयो,’ उनले भने।
आइतबार नाबालिकाले पनि बकपत्र दिने क्रममा जाहेरीमा उल्लेखित विवरणहरुमा सत्यता नभएको बताएकी थिइन्। तनहुँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार मिन बहादुर कुँवरका अनुसार पीडित बालिकाका बुवाले पनि छोरीमाथि कर णी नभएको तर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको उक्साहटमा जाहेरी दिएको होस्टाइल बयान दिएका छन् । उनले आफूलाई प्रलोभनमा पारेर जाहेरी दिन लगाएको पनि बताएका छन् ।
यसअघि पीडित नाबालिगले पनि अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा आफूले विभिन्न व्यक्तिहरुको उक्साहटमा जाहेरी दिएको तर आफूमाथि कर णी नभएको बयान दिएकी थिइन् ।